Benishaangul Gumuz Afaan Oromoo ‘afaan hojii hin goone’ - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBenishaangul Gumuz Afaan Oromoo ‘afaan hojii hin goone’
Naannoon Benishaangul Gumuz Afaan Oromoo ‘afaan hojii hin goone’
Gidduu kana oduun Naannoon Benishaangul Gumuuz Afaan Oromoo afaan hojii naannichaa akka ta’u murteesse jedhan miidiyaa hawaasummaa gubbaa baay’inaan mul’achaa turan.
Haa ta’u malee, kuni dhugaa akka hin taane BBC’n odeeffateera.
Hogganaan Biiroo Kominikeeshinii naannichaa Obbo Galataa Hayiluu ‘’mana barumsaatti akka baratan malee afaan hojii akka ta’uf hin murtoofne,’’ jedhan.
Inumaa manneen barnootaa keessatti bara 2011 Afaan Oromoon barsiisuun ni eegala jedhamus rakkoo nageenyaan hanga ammaa akka hin eegalleefi bara dhufu eegalu akka danda’u himaniiru.
Naannoo Benishaangul Gumuuzitti namoonni Afaan Oromoo dubbatan hedduu dha.
Obbo Galataan akka jedhanitti Naannoo Benishaangul keessaa harki ‘’80 ol Afaan Oromoo ni haasa’u.’’ Yeroo ammaa afaan hojii naannichaa Afaan Amaaraadha.
Suuraa: Biiroo kominikeeshinii naannichaa